Betsaka ny sidina Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga ary Seville amin'ny Lufthansa ankehitriny
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Betsaka ny sidina Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga ary Seville amin'ny Lufthansa ankehitriny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao farany Italia • Vaovao • People • Vaovao Mafana Portugal • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny toerana fialan-tsasatra eropeana manan-danja indrindra dia hotompoina miaraka amin'ny sidina fanampiny mihoatra ny 80 avy any amin'ny seranam-piaramanidina Maintenge Rhein-Main sy sidina fanampiny 50 avy any Munich.
Lufthansa dia nanampy sidina fanampiny 130 avy any Frankfurt sy Munich mankany amin'ny toerana fialantsasatra eropeana malaza.
Lufthansa dia nanambara ny fanitarana sidina anatiny hafa avy any Frankfurt mankany Berlin, Hamburg, Munich ary avy any Munich mankany Berlin, Hamburg ary Düsseldorf.
Manomboka amin'ny volana oktobra dia hisy fifandraisana iraika ambin'ny folo isan'andro avy any Frankfurt mankany Berlin fa tsy fifandraisana sivy isan'andro.
Mitaky be ny sidina mankamin'ny toeram-pialan-tsasatra amin'ny fialantsasatra amin'ny fararano ho avy. Aorian'ny volana Aogositra, Oktobra dia mampiseho ny fiakarana avo indrindra amin'ny famandrihana mankany amin'ny toerana mafana sy eoropeana. Vokatr'izany, Lufthansa dia manitatra ny fandaharam-potoanan'ny sidina mankany amin'ny toerana malaza an'ny masoandro.
Lufthansa Ireo toerana itodiana any Espana dia tena be mpitady. Noho izany, manolotra sidina fanampiny ho an'ny Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga ary Seville. Portugal, Italia ary Gresy dia mbola malaza ihany koa. Lufthansa dia manolotra sidina fanampiny mankany Faro sy Madeira (samy Portugal), ary koa mankany Cagliari any Sardinia, Catania any Sisila, ary Rhodes (Gresy) mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra.
Rehefa mikasa, ny mpandeha an-habakabaka dia tokony hitandrina hatrany ny lalàna mifehy ny fidirana sy ny quarantine.
Ho fanampin'izay, ny fangatahana fitsangatsanganana an'habakabaka dia mitombo hatrany amin'ny fitetezam-paritany. Lufthansa hanohy hanitatra ny tolotra sidina anatiny ho an'ireo zotra izay manandanja indrindra ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra. Nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia efa nanitatra ny serivisy ho an'ny Oktobra tamin'ny 45 isan-jato ny zotram-piaramanidina amin'ny zotra Frankfurt mankany Berlin, Hamburg, Munich ary avy any Munich mankany Berlin, Hamburg ary Düsseldorf, raha oharina tamin'ny Jolay.
Ankehitriny, misy fifandraisana fanampiny atolotray amin'ny fotoana fohy. Midika izany, ankoatry ny zavatra hafa, manomboka amin'ny volana oktobra dia hisy hatrany amin'ny iraika ambin'ny folo fifandraisana isan'andro avy any Frankfurt mankany Berlin fa tsy fifandraisana sivy isan'andro.
Ankoatr'izay, hisy sidina folo isan'andro avy any Frankfurt mankany Hamburg fa tsy fifandraisana valo isan'andro. Mitovy amin'i Munich ny toe-javatra: Raha tokony hifandray isan'andro enina, ny fandaharam-potoanan'ny sidina avy amin'ny "MUC" dia hahatratra sivy isan'andro ny fifandraisana amin'i Düsseldorf manomboka amin'ny volana oktobra.
Ary koa, amin'ny fanitarana ny fandaharam-potoanan'ny sidina, misy fifandraisana bebe kokoa ankehitriny mandritra ny tontolo andro. Ireo mpandeha izay maniry matetika ny manidina amin'ny maraina na amin'ny hariva dia afaka mahazo tombony ankehitriny amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina nohatsaraina.
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 22